Manatsara ny SEO amin'ny votoatin-kevitra: Hevitra avy amin'ny Semalt
Tsy mikasa ny hanatsara ny toerana misy anao irery ny SEO eto an-toerana. Mitaky ihany koa ny fitazonana izanyfifandraisana salama amin'ny vondrom-piarahamoninao an-tserasera ary ny fisian'ny aterineto matanjaka amin'ny alalan'ny tranokalanao sy ny media sosialy. Ny media sosialy dia mananaho lasa sehatra tsara ho an'ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao.
Tamin'ny taona 2009, Google dia nanomboka niasa tamin'ny fampidirana ireo angona sosialy amin'ny fikaroham-bokinyalgorithm - backup and disaster recovery in portland. Midika izany fa ny fampifandraisana ny tranokalanao sy ny sehatra media sosialy toy ny Facebook, Twitter ary Instagram dia hitondra fiovana lehibe kokoaary fitsidihana toerana. Vokatr'izany dia hitombo ny toerana misy anao.
Ho an'ny orinasa eo an-toerana, ny antsipiriany rehetra, isan'izany ny ora fiasana, daty, ary ny vidinyTokony ho eo an-databatra. Mpitantana Success Successor of Semalt ,Ny Frank Abagnale dia manome ireo hevitra izay hanampy anao hanatsara ny tranokalanao sy ny fanatrehan'ny media sosialy mba hahatongavana amin'ny fifamindram-pahefana ambony sy ny fisainana
1. Ampio blôgy ho an'ny tranonkalanao
Ny bilaogy dia tena ilaina amin'ny tranonkala. Ampiasao izany mba hamoahana ny vaovao faranyny vokatra sy ny tolotra, ny mpanjifanao ary ny fiarahamonina ao an-toerana. Mba hahatonga ny bilaogy hifanakalozan-kevitra, mandinika ireto hevitra manaraka ireto.
Manampy sary sy tantara momba ny mpanjifa izay tsy mivadika amin'ny raharaham-barotrao
Anontanio ny mpanjifa ny zavatra niainany sy ny tolo-keviny mba hanatsarana ny tolotra ataonao.Aorian'ity, ambarao ny tafatafa sy ny sary ao amin'ny blôginao. Azonao alohan'ny famoahana azy ireo. Apetraho amin'ny tantara sosialy samihafa ny tantaraary manome rohy mankany amin'ny blôginao. Ity dia fomba tsara handraisana ny mpanjifanao. Hahatsiaro ho faly izy ireo.
Mamolavola sary momba ny raharaham-barotra amin'ny fotoana samihafa
Alefaso imailaka ireo sary ary ambarao azy ireosehatra fampahalalam-baovao ary koa manome rohy mankany amin'ny tranokalanao. Ampiasao ny sary hanavaoanao ny Google My Business, Yahoo local sy Bing Places photos.
Manasongadina vokatra na fidirana manokana
Manampy amin'ny fitazonana ny mpanjifanao manavao ny tolotr'asa ny fanaovana izany.
Manorata tantara mampihorohoro mifandraika amin'ny orinasa
Aleo lazaina fa mpanadio maina ianao, ary apetaho amin'ny akanjo maloto nosasanao. Soratyny tantara momba ny fomba nandotoana an'io akanjo io sy ny sisa. Ny orinasa dia tsy afaka manadino ny 'tantara mampihorohoro'. Mitadiava olona iray ary afeno ao amin'ny blôginao izanyZarao amin'ny media sosialy izany avy eo.
2. Mifandray amin'ny The People Influent from Your Community
Ampiasao ireo pejin'ny haino aman-jery sosialy hifandray amin'ny olona manana ny lazanao toy ny olo-malaza eo amin'ny faritra misy anao.Mifanakaloza amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fizarana ny lahatsorany ets. Ireo olona eo an-toerana ireo dia afaka manampy amin'ny fivarotana ny vokatra sy ny serivisinao. Rehefa namaly izy ireoho an'ny fanehoan-kevitrao, sns, ny olona sasany dia afaka mahita izany ho fanekena.
3. Manaova viriosy
Rehefa mamorona zavatra izay miparitaka amin'ny media sosialy dia maro ireo olona no mahatsiaro mahalianaao amin'ny orinasa na orinasa misy anao. Hanomboka hikaroka ny orinasanao ny olona ary hahita azy ireo ho toy ny vokatra.
4. Mifandray amin'ny fiaraha-monina anananao
Mampiasà zava-mitranga eo an-toerana mba hifandraisana amin'ny fiarahamonina misy anao. Soraty ny zava-mitranga any amin'ny manodidina anaoao amin'ny media sosialy sy ny bilaogy. Ny mpankafy dia mety hizara ireo lahatsoratra izay mahatonga ny olona maro hahafantatra ny orinasanao / orinasa. Azonao atao ihany koa ny manampy eo an-toeranakalandrie araka ny zava-misy ao amin'ny tranokalanao. Ataovy azo antoka fa havaozina tsy tapaka izany.
Ho an'ny SEO eo an-toerana mba hahomby, ampitomboy izany ho an'ny laharana ambony amin'ny milina fikarohana sydia mamoròna votoaty vaovao ho an'ny bolongana sy ny lahatsoratry ny media sosialy. Ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ao amin'ny tambajotra sosialy dia mitondra mankany amin'ny tranokala ambony kokoaary noho izany dia misy ny laharana ambony amin'ny milina fikarohana.